तीन कोइरालाको संकल्पः कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने अठोट
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४ समय: ९:१८:३८
कांग्रेसमा कोइराला परिवारका तीन नेताले ‘विरासत’ फर्काउने उद्घोष गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक, सुुजाता र डा. शेखरबीच मंगलबार भएको भेटमा पार्टीमा पुनः कोइराला परिवारको शक्ति फर्काउने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
गत ४ साउनमा कांग्रेस महामन्त्री शशांकको टोखास्थित निवासमा एकसाथ पहिलोपल्ट राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेका तीन नेताले सात महिनापछि अब सशक्त ढंगले पार्टीमा प्रस्तुत हुने सहमति गरेका छन् । मंगलबार गिरिजापुत्री सुजाताको मण्डिखाटारस्थित निवासमा शशांक र शेखर कोइरालाले खानासहित तीन घन्टा छलफल गरेका थिए ।
कांग्रेसनेतृ सुजाता कोइरालाले निर्वाचनपछि पार्टी कमजोर बन्दा आफूहरूलाई चिन्ता भएको भन्दै पुरानै साख र छवि फर्काउन निरन्तर छलफल गरेको जानकारी दिइन् । ‘निर्वाचनपछि कांग्रेसको संगठन कमजोर भएको देखियो । गुट, उपगुट र झगडाको राजनीतिले हामी कमजोर भएका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अब सधैँ यसैगरी कांग्रेस कमजोर रूपमा चल्न सक्दैन । कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन हामीले छलफललाई निरन्तरता दिएका हाैँ ।’ तीनवटै निर्वाचनमा पार्टीले अस्वाभाविक हार व्यहोरेको भन्दै हारको समीक्षा गर्दै कारण खोज्ने र समाधानको उपाय पत्ता लगाउन आफूहरू केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।
तीन नेता पार्टीमा आफ्नो परिवारको वर्चस्व गुमेको र कांग्रेस कमजोर भएपछि आफूहरू पुनः मिलेर अघि बढ्नुपर्ने साझा सहमतिमा पुगेका छन् । तर, १४औँ महाधिवेशनसम्म कसले नेतृत्व गरेर जाने भन्नेमा टुंगोमा पुगेका छैनन् । अहिले नै नेतृत्वमा दाबेदार देखिँदा आफ्नो पक्षका नेता भड्किन सक्ने भएकाले उनीहरूले कोइरालाहरूको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने व्यक्ति तत्काल घोषणा गरेर नजाने नीति लिएका छन् । ‘तीनमध्ये जो हुने हो, सहमतिबाटै हुन्छ, तर अहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ शेखरका स्वकीय सचिव थपलिया भन्छन्, ‘जसले नेतृत्व गरे पनि सहमतिबाटै हुन्छ ।’
कांग्रेसमा कोइराला विरासत फर्काउन शशांक, सुजाता र शेखरलाई त्यति सहज भने हुनेछैन । नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि अरू प्रभावशाली नेताको झुन्डलाई विश्वासमा लिने र मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन् । प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, असन्तुष्ट युवा नेताहरूलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौतीपूर्ण छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।